Xiaomi Pocophone F1 na-ebibi asọmpi ya na Geekbench | Gam akporosis
Xiaomi Pocophone F1 na-ebibi asọmpi ya na Geekbench
Anyị nọ na ụbọchị ole na ole mgbe ọmalichara ọrụ ya y Xiaomi Pocophone F1 na-enwu na Geekbench. Edepụtara ekwentị a site na Ialọ ọrụ ọhụrụ nke Xiaomi dị ka nna ukwu nke ọsọ na dịka nyocha ọhụụ ọhụụ a anyị nwere ike ịsị na aha ahụ na-eme nke ọma.
Ekwentị enwetawo nnukwu nsonaazụ n'elu ikpo okwu nke benchmarks, ọ gafere ule ndị ka mma karịa ngwaọrụ ọ bụla na-enweghị egwu egwu.
El Pocophone enwetawo ihe 9081 na otutu arụmọrụ karịrị akụrụngwa dị elu dịka OnePlus 6, Xiaomi Mi 8 na Samsung Galaxy S9 Plus, ebe na otu isi arụmọrụ ọ bụ naanị ngwaọrụ dị mma karịa Galaxy S9 +.
Xiaomi Pocophone F1, ekwentị dị ọnụ ala karịa Snapdragon 845
Ihe ọzọ bara uru nke Xiaomi Pocophone F1 karịrị asọmpi ya bụ na ọ nwere ike bụrụ Ọ ga-abụ ngwaọrụ dị ọnụ ala ịnweta igwe isi asatọ nwere Snapdragon 845, ihe kacha mma Qualcomm na-agba ọsọ na 2.8 GHz.
A hụrụ Pocophone n'oge na-adịbeghị anya na ire ere na ọnụahịa nke 430 Euro, 50 Euro obere karịa mobile dị ọnụ ala na Snapdragon 845 na ahịa ugbu a, Asus Zenfone 5Z. N'ezie, ọnụahịa a ka akwadoghị.
Dabere na nsị ndị na-adịbeghị anya, Xiaomi Pocophone F1 ga-enwe atụmatụ nke polycarbonate iji belata mbenata. Tinyere Snapdragon 845 nke Pocophone F1 ga-enwe 6 GB nke RAM, 64 GB nke nchekwa dị n'ime. Igwefoto kachasị ga-abụ okpukpu abụọ na mkpebi nke 12 MP na 5 MP, ebe igwefoto kachasị ga-enwe mkpebi nke 20 MP. N'ikpeazụ, a na-ekwu na batrị ngwaọrụ a ka ọ bụrụ 4000 mAh kachasị mma ka ọ dịrị ihe karịrị otu ụbọchị iji ya eme ihe.
N'ezie, ihe ndị a niile bụ asịrị ndị na-agaghị akwado ma ọ bụ gọnahụ ruo mgbe August 22 na-esote, mgbe ụlọ ọrụ ahụ na-eweta ngwaọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi Pocophone F1 na-ebibi asọmpi ya na Geekbench
Google na aru oru ihu maka enyemaka Google
Blackberry KEY2 LE ga-ekpughe na IFA 2018